musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Hurongwa hutsva hwepasi rose hweMakumi eChiito cheKuchengetedza Mugwagwa
Chirongwa chinokurudzira vamiriri vekuchengetedza migwagwa kuderedza kufa nekukuvara mumigwagwa kuburikidza nematanho akawanda, kusanganisira kuona kwakanaka.
Kuparurwa kuchangobva kuitwa kweGlobal Plan yeMakore gumi eChiito cheMugwagwa Kuchengetedzwa kunoratidza chiitiko chakakosha mukuedza kuri kuenderera mberi kwekuona kufamba kwakachengeteka kune vese. Yakagadzirwa neWHO nemakomisheni ematunhu eUN, mukubatana nevashoma vanosvika zana nemakumi mana mumubatanidzwa weUN Road Safety, chirongwa ichi chinoburitsa nzira inounza hupenyu kusarudzo yeUN General Assembly A/RES/140/74 pa “Kuvandudza Nyika Kuchengetedza Mugwagwa”.
Sekureva kweWHO, vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vanofa zuva rega rega mumigwagwa pasi rose - vangangosvika miriyoni 3,500 ndufu dzinodziviririka uye kukuvara kunofungidzirwa kusvika mamirioni makumi mashanu - zvichiita kuti ive muurayi mukuru wevana nevechidiki pasi rose. Pasina chero kupindira, 1.3 mamiriyoni ekufa uye 50 mamiriyoni ekukuvadzwa anofungidzirwa kuitika mumakore gumi anotevera.